Falanqaynta arrimaha saameynaya waxtarka sunta cayayaanka - Nidaamka Baradhada
Waxaan falanqeynaa arrimaha saameeya waxtarka sunta cayayaanka
Mawduucani waa mid aan loo dulqaadan karin oo saxaafadda si kooban looga hadlay, in kasta oo gabi ahaanba qofkasta uu wajaho dhibaatadan marka la isticmaalayo sunta cayayaanka. Agaasime Augusta Dhanka suuqgeynta iyo iibka, Mikhail Evgenievich Danilov wuxuu gacanta u geliyey arrinta waxbarashada gacantiisa wuxuuna ku qoray dib u eegis faahfaahsan oo ku saabsan waxyaabaha saameynaya waxtarka cayayaanka. Maqaalkan, waxaan ku bilaabeynaa inaan kugu barano isaga.
Nasiib darrose, mararka qaar waa inaan la tacaalnaa cabashooyinka ku saabsan wax ku oolnimada dawooyinkeenna. Oo ha u oggolaado shaqaale ka socda shirkad kale oo caalami ah oo aad loo ixtiraamo oo soo saarta sunta cayayaanka iyo / ama walxaha kiimikada ah ha dhagxaan ii tuuro, oo magaciisa weyn ka ilaalin kara sheegashada. Sheegashooyinka, kuwaas oo had iyo jeer aan si buuxda ugu xirnayn tayada badeecada gaarka ah ee la isticmaalo.
Dabcan, way noo fiicnaan laheyd inaanan galin wadahadalada mowduucaan qunyar-socodka ah, laakiin si fudud loo dhiso hub badbaado leh weedho qurux badan oo ku saabsan sharaxaadda daroogada, sida caadada u ah shirkadaha qaar oo ku soo noqday inay awood u leeyihiin inay joojiso dacwadaha malaayiin doolar ah ee macaamiisha (waa inaan si daacadnimo leh u sheegaa inay inta badan si liidata u liqaan) . Wax lagu muujiyo tusaalaha mid ka mid ah soosaarayaasha ugu weyn ee sunta cayayaanka. Ka soo xigso bartiisa rasmiga ah:
“Talooyinkaasi waxay ku saleysan yihiin waaya aragnimadeena hadda jira oo aan u hoggaansameynaa xeerarka ay ansixiyeen masuuliyiinta diiwaangelintu Uma dhaafaan isticmaalaha qiimeyntiisa iyo tixgalinta arrimo fara badan oo go'aamiya isticmaalka <…> diyaarinteena <…> Mas'uuliyadda <…> u hogaansanaanta shuruudaha tikniyoolajiyadda iyo xeerarka waxaa iska leh soo saarayaasha beeraha <…> Dhinaceena, waxaan ka reebeynaa mid kasta ama masuuliyada cawaaqibka ka dhalan kara isticmaalka daroogada.
Sababo kala duwan oo ay ugu wacan tahay duruufaha maxalliga ah iyo kuwa gobolka ayaa saameyn ku yeelan kara waxtarka daawada. Marka ugu horeysa, kuwanu waa cimilada iyo xaaladaha cimilada-cimilada, gaar ahaanta u gaarka ah, wareegga dalagga, waqtiyada wax-ka-qabashada, heerarka isticmaalka, isku-darka taangiyada leh diyaarinta kale iyo bacriminta (laguma sheegin talooyinkayaga), jiritaanka noolaha adkeysiga leh (cudurada, dhirta (haramaha), cayayaanka iyo nooleyaasha kale ee la bartilmaameedsado), aan habooneyn iyo / ama farsamo aan hagsanayn oo loo isticmaalo, iyo in ka badan. Xaalado gaar ah oo aan laga fiirsan oo adeegsadayaashu aan tixgelinaynin, midkoodna kama saari karo isbedelka wax ku oolnimada daroogada ama xitaa waxyeelo u geedaha la beero, cawaaqib xumada aan annaga iyo shuraakadayada ganacsiga aan mas'uul ka noqon karno.
Wax kasta oo la qoro, guud ahaan, si sax ah ayaa loo sheegay. Waa inaan dhahaa inta badan sheegashooyinka ay u baahan tahay in Augusta tixgeliso aysan la xiriirin qalloocinta tayada alaabadayada. Shirkadda kuma faanayso waxsoosaarkooda casriga ah iyo qalabeysanba leh sayniska kiimikada ee ugu dambeysay. Waxaan furay warshaddii sedexaad xagaaga xagaaga 2019 waana ku faraxsanahay inaan ku marti qaadno jaalayaasheena halkaas. Furitaanka afaraad (horeyba u soo saaray soo saarida walxaha firfircoon) waxaa la qorsheeyay bishii Maarso 2020 ee gobolka Hubei, taas oo caan ku ah dhammaanteen. Sababo muuqda awgood, furitaanka rasmiga ah waxay ahayd in dib loo dhigo.
Sheegashooyinka la xiriira shaqada difaaca kiimikada ee badbaadada waxay kuxiran yihiin si sax ah xaqiiqda ah in xaalada lagu muujiyey xigashada kore inay tayo ahaan leedahay "Qiimaynta iyo xisaabinta dhowr arrimood oo go'aaminaya isticmaalka daroogada", laga bilaabo "Ha xoreyn isticmaalaha", isticmaalehaan wuxuu curyaan ahaa (sida higgaadda Winnie the Pooh, kaas oo, "guud ahaan, waa wanaagsan yahay, laakiin curyaan ah").
Mararka qaar Suuragal maahan in la muujiyo dhammaan qodobbada ku jira agabyada xayeysiinta. Daraasadaha iyo soo bandhigista, sidoo kale had iyo goor Suuragal maahan in la xoojiyo. Ka dib oo dhan, takhasuska gaarka ah, sida Kozma Prutkov uu u yiqiin, "waa sida hargab: buuxsanaantiisa waa hal dhinac". Indhaha takhasuska leh waa “gubasho”; fiirogaar u muujiya waxyaabo isaga u muuqda oo fahmi kara isaga markasta diirada saaraya. Markay tahay qof qaali ah, daqiiqadahan "cad" waxay u ekaan karaan sida 'terra incognita' oo dhammaystiran.
Tusaale ahaan, waxaan qornay in daroogada lagu isticmaalo gudaha heerkulka u dhexeeya 15 - 25 ° C. Si rasmi ah iskaga xoreynay mas'uuliyadda haddii badeecadeenna loo adeegsaday kuleyl soddon darajo ah. Xaqiiqdii, ma fiicna in lagu daaweeyo cimilada kulul ama qabow. Laakiin mararka qaarkood ma fiicna, laakiin waa lagama maarmaan. Waana in loo sharaxaa macmiilka kiisaska ay labadaba xun yihiin oo aan loo baahnayn, oo aysan fiicnayn, laakiin haddii ay aad u baahan tahay, markaa wali waa suuragal.
Aynu oggolaanno, iyada oo aan ka fogaanno waxa ku xusan xaashiyaha waraaqaha iyo dukumiintiyada diiwaangelinta, aan u gudubno arrimo dibedda ah oo si khaldan u saamayn kara waxsoosaarka tayada sare leh. Waxaan ka raadineynaa dariiqa daroogadayada dhirta illaa bartilmaameedka. Waxaanuna isku dayi doonnaa inaan fahanno waxyaabaha sababi kara 'inuu isaga qaldamo'.
Gaadiidka iyo xaaladaha kaydinta.
Tayada biyaha loo adeegsado diyaarinta xalka shaqada (pH, cufnaanta, halabuurka cusbada kala diri, heerkulka).
Xaaladaha cimilada labadaba waqtiga arjiga iyo ka hor iyo ka dib codsashada (heerkulka iyo huurka, dabaysha, isbedelka heerkulka, roobka roobka kahor iyo ka dib buufinta).
Ramaasadleyda la adeegsaday, noocyada sunta buufiyeyaasha ah iyo noocyada hawl geeya murqaha (cabirka isticmaalka xalka shaqada, cabirka dhibcaha, tirada dhibcaha halkii unug ee geedka la daaweeyay iyo saamaynta ay taraamkan ku leedahay nidaamka / sunta cayayaanka lagu buufiyo).
Sifooyinka carrada (jiritaanka ama maqnaanshaha qashinka dhirta iyo burooyinka dushiisa, qaab-dhismeedka carrada iyo qoyaan, ciidda nuugaysa guryaha adag).
Qaababka beero-teknolojiyadda ee qulqulatooyinka iyo dalaggii loo adeegsaday xilligii koritaanka.
Wejiga horumarinta haramaha iyo xaaladooda.
Wejiga horumarinta dhaqanka, xaaladdiisa iyo astaamaha isku-darka.
Marxaladda horumarka cudurka.
Marxaladda horumarka cayayaanka
Joogitaanka noolaha noolaha ah ee adkaysiga u leh haramaha, cayayaanka iyo cudurada, bedelka sunta cayayaanka oo leh habab kala duwan oo ficil ah si loo yareeyo halista noocyada adkeysiga leh.
Isku darka walxaha taangiyada ee sunta cayayaanka lagu buufiyo, beero-kiimikada (waafaqid-kiimikaal iyo cilmiga noolaha).
Saameynta sunta cayayaanka, xayiraadaha dalagyada.
Iyada oo la tixgalinayo qeexitaanka diiwaangelinta walxaha firfircoon (halkan ka gadaal - D.V.) ee dalal kala duwan iyo qawaaniinta heerarka ugu oggollan ee maadada harsan ee D.V. wax soo saar.
Iyo wax kale oo aan ilaaway inaan xuso - oo sidaas darteed qor, waxaan tixgelin doonnaa agabyada ku xiga.
CODSASHADA IYO XIRIIRADA
Laakiin ku bilaabi mayno arrimo dibadeed, laakiin kuwa gudaha ah - oo leh sameynta iyo baakaynta. Si loo fahmo tayada sameynta, waxaa haboon in la soo booqdo warshadaha Agoosto, halkan sheekooyinka waa kuwo aan macno laheyn, waxaa mudan in la arko ugu yaraan hal mar. Intaas waxaa sii dheer, waa in maskaxda lagu hayaa in inta lagu guda jiro howl-qabad kasta, gar-qaadid iyo muunado wakiil laga qaadayo, kuwaas oo lagu keydiyo warshadda oo ay had iyo jeer suurtagal tahay in la caddeeyo u hoggaansanaanta daroogada iyada oo la raacayo shuruudaha farsamada.
Sida baakadaha, shirkadda Agoosto ee dhammaan dhirta laga soo bilaabo bilowgii 2020 calaamadaynta qayb kasta oo kaydinta shaqsiga ah (gasacadaha, dhalada, xirmada) oo leh lambar taariikh gaar ah ayaa la soo saaray. Waxay ku saabsan tahay badeecado xirfadlayaal ah. Diyaargarowga loogu talagalay degenayaasha xagaaga (LPH), waxaan adeegsanaa sumad gaar ah. Hadana, adoo adeegsanaya arjiga mobilka ee Agoosto Agoosto, waxaad xaqiijin kartaa xaqiiqada alaabooyinkayada. Barnaamijyada "AgroMarker August" iyo "AgroSklad August" ayaa saamaxaya dabagalka keenida alaabada iyo soo celinta weelasha madhan ee horeyba ugu jiray bakhaarradii macaamiisheena.
Waxa jira sumad la mid ah ama calaamadaha la mid ah oo ku saabsan badeecada qaar ka mid ah soosaarayaasha kale. Agoosto ayaa qaaday dadaallada si loo abuuro halbeeg mideysan oo sumadeynta iyo barnaamijyada wax soo saarka sunta cayayaanka iyo warshadaha tahriibka. Waxaan rajeyneynaa inay sidaas noqon doonto.
Marka waxaan ka fiirsan doonnaa intaas oo dhan silsiladda dhaqdhaqaaqa alaabadayada aan ka hadlayno badeecad tayo sare leh iyo asal ah, oo aan ka aheyn been abuur.
XARUNTA GAADIIDKA IYO JOOJINTA
Dhibaatooyin ayaa horeyba uga soo dhici kara laga soo bilaabo bakhaarka bisha Agoosto ilaa bakhaarka macaamilka iyo marka lagu keydiyo. Waxay ku xiran yihiin, marka ugu horreysa, oo leh heerkul. Dhammaan sunta cayayaanka waxay leeyihiin heer kuleyl gaar ah. Qaar (tusaale ahaan, Tornadoes) si fiican bay u qabooban yihiin baaxadda balaaran ee waddankeenna, ka dibna way qaboobeen iyagoon si fiican u lumin. Sidaa darteed, waa la qaadi karaa laguna keydin karaa heerkul aad u ballaaran oo ballaadhan. Oo waxaa jira daawooyin kuwaas oo diiradda this aan macquul aheyn: waa in lagu kaydiyaa oo keliya xaaladaha ah heerkulka lagu daray.
Hubso inaad fiiro gaar ah siiso tan. Dhamaan soosaarayaashu way yaqaanaan astaamahaas waxayna bixiyaan talooyin ku saabsan nidaamka heerkulka kaydinta. Intaas waxaa sii dheer, macluumaadka noocaas ah had iyo jeer waxaa lagu muujiyaa sumadda. Haddii shuruudaha xilliku ay yihiin kuwa hadhaaga ah oo ah wixii haraaga ah ee alaabada kaydinta diiran ayaa la sameeyay, hubi inaad u geyso bakhaar kuleyl ah qaboobaha. Haddii ay ugu wacan tahay kormeer ama duruufo kale awgeed, daroogada ayaa lagu keydiyay xaalado aan habooneyn - hubi ka hor intaadan isticmaalin iyada oo gacan ka helay isla soo saaraha. Wuxuu awoodaa inuusan kaliya qiimeyn karin waxa ku jira D.V., laakiin wuxuu kaloo go'aamin karaa tayada sameynta ee tilmaamayaasha kale ee saameeya waxqabadka sunta cayayaanka.
Aynu dib u soo xusuusanno xariiq cajiib ah oo ka timid hees ilaa aayadaha Leonid Derbenev - "biirka ma dilo dadka, biyuhu waxay baabi'iyaan dadka". Dabcan, uma badna in qofna ku fikiri lahaa inuu sameeyo xal shaqo ku saleysan biir, laakiin u diyaarinta ku saleysan biyaha, iyada oo aan la qiimeyn tayadeeda, waa xaalad ka badan inta caadiga ah.
Hadana hadii aan nidhaahno in la qiimeeyo waxtarka sunta cayayaanka iyadoo la raacayo habka tijaabada goobta, tijaabada hal-abuurka ah ayaa loo baahan yahay, markaa waxaan badanaaba iska ilownaa tayada biyaha sidoo kale waa cunsur mararka qaar xaddidi kara xalka shaqo gaar ah.
Waa maxay biyaha?
Badanaa waxaa naloo weydiiyaa su'aalo ku saabsan diyaarinta isku-darka taangiyada. Waxay isweydiinayaan dawooyinka lagu daro biology, tusayaasha kiimikada kiimikada, iwm. Laakiin way iloobaan waxa laf ahaantiisa biyo yihiin. Waxay umuuqataa in su’aashu ay fududahay: heerkulkiisu yahay 0 illaa 100 ° C, waa dareere hufan, molecule kasta oo ka kooban laba atom hydrogen iyo hal - oksijiin, taasi waa, N2A. Laakiin biyaha aan u isticmaalno nolosha, xitaa cabbitaan saafi ah, ugu yaraan farsamo ahaan, marka loo eego aragtida kimistariga, ma aha biyo. Xaaladda ugu wanaagsan, kani waa xalin loo diyaariyey taangiyada milixda iyo gaasas kala duwan, iyo tan ugu xun, oo ah xalka ka kooban ganaaxyo kala duwan iyo emulsion. Sababtoo ah xitaa biyaha la cabo, sida ku xusan xeerarka SanPiN ee u dhigma, isugeynta macdanta waxay gaaraysaa ilaa 1 g / l. Taas macnaheedu waa in 100 l oo biyo ah oo noocaas ah ay ka koobnaan karaan 100 g oo cusbo kala duwan ah. Maxaan ka dhihi karnaa biyo aan la cabi karin!
Marka "xalka" tan, oo ah 100 l oo ka kooban dhowr tobanaan illaa dhowr boqol oo garaam oo ka kooban xeryahooda kala duwan, waxaan mararka qaarkood ku darnaa garaam ka mid ah walxaha firfircoon ee sunta sunta cayayaanka, oo si jacayl loogu diyaariyey xaaladaha daahirka caafimaad. Markaa markaa ma fahmi karno: waa maxay diyaarinta noocee ah? Waa ay shaqaysaa, ma shaqeynayso. Waxay u muuqataa in xisbigu mid yahay, oo iyagu kama ay xadin jidka agtiisa, oo si sax ah ayey u kaydiyaan, laakiin saamaynta ka soo baxdaa waa eber garoonkaan, laakiin dhinaca kale toban kiiloomitir waxwalba waa hagaagsan yihiin. In kasta oo si isku mid ah loogu isticmaalay isla dalaga iyo haramaha, isla xaaladaha cimilada isku midka ah, kuwa wax buufiya, kuwa buufiya iyo qaababka. Qarsoodiguna waa sahlan yahay - “maaha biirka laaya dadka, biyuhu way dilaan dadka» (in kasta oo biirku sidoo kale uu wax duminayo, dabcan, laakiin tani waa wax ka baxsan xaddiga maqaalka). Daawadu ma shaqeynin maxaa yeelay waxyaabaha ku qoran nijaasta gaar ah ee ku jirta biyaheena dhabta ah waxay ku reebtay musiibo saameynteeda.
Waa maxay sifooyinka biyaha ee ay tahay inaan fiirsado?
Cusbada la kala diray
Waxay ugu horreyntii ku saabsan tahay cusbada adkaanta - kaalshiyamka iyo magnesium.
Halabuurka kiimikada ayaa ka badan ama ka yar joogtada biyaha biyaha artesian, sidaa darteed haddii aad ku go'aamisay sheybaarka takhasuska leh, waxaad diiradda saari kartaa falanqayntaan sanado badan. Asaga oo ku salaynaya go'aan qaadashada: in la saxo biyahaaga iyo in kale.
Haddii aad biyo uga isticmaasho ilaha dusha sare ama ceelasha gacmeed, falanqaynta la sameeyay xitaa maalmo ka hor ayaa laga yaabaa inay horeba qiimo qiimo leh u leedahay. Waxba kuma lahan sameynta hada biyahaaga.
Kombuyuutar ku shaqeynaya
Go'aanka hawlgalka ee adag ee biyaha, qofku wuxuu u adeegsan karaa tilmaame aan toos ahayn sida dhaqdhaqaaqeeda korantada, taasoo, dhanka kale, ay fududahay in la cabbiro iyadoo la adeegsanayo mitirka dhaqdhaqaaqa. Stоwaa aaladdan nooca la qaadan karo ah oo ah 50 - 100 doolar halkii gabal, waxay kuxirantahay xoogga iyo "qabowga» Moodooyinka. Qalabka noocan oo kale ahi waa inuu ku jiraa qof kasta oo is-ixtiraama oo cilmi-nafsi yaqaan ama lataliye. Qalabka korantaduhu waa ka raqiisan yihiin, laakiin waxay u muuqdaan inay si dhakhso leh u dhacaan. Haddii socodka biyahaagu aanu dhaafin 500 oo microsiemens / cm, waxaad u tixgelin kartaa inay shuruudo ku habboon tahay ku buufin marka loo eego adkaanta.
Haddii qiimayaashu ka sareeyaan (ama aad rabto inaad si ammaan ah u ciyaarto oo aad kordhiso waxtarka badeecada), markaa u diyaarinta xalka dawooyinka cayayaanka laga bilaabo d. ku saleysan cusbada biyaha-millada ee aashitada dabiiciga ah ama kaliya aids-ka, biyaha waa in la saxaa. Halkan waxaa ah liiska d.v. iyo magacyo ganacsi oo loogu talagalay dawooyinka Augusta» (Tani waxay sidoo kale khusaysaa alaabada tartameyaasha).
2,4-D (Biolan Super)
Bentazone (Corsair, Corsair Super)
Glyphosate (Tornado, Tornado 500, Tornado 540)
Dikamba (Deimos, Biolan Super, Dublon Super)
Imazamox, imazapir, imazethapyr (Paradox, Corsair Super, Grader, Fabian)
Quinmerac (Tranche Super)
Kletodim (Graminion, Kvikstep)
Clopyralide (Galion, haye)
MCPA (Herbitox, Herbitox-L, Gorgon)
Picloram (Galion, Gorgon, Ballerina Forte)
Qaboojiyeyaasha biyaha ee kala duwan ee ku saleysan orthophosphoric, oxalic, acid citric waxaa loo isticmaalaa in lagu saxo biyaha.Waxay yihiin dareeraha, ku habboon oo ay ku jiraan midabada calaamadaha iyo walxaha gubanaya. Bishii Agoosto» qaboojiyaha noocan oo kale ah ayaa sidoo kale jira - kani waa Soylent. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa sulfate ammonium, laakiin way ka adag tahay in lala shaqeeyo, gaar ahaan haddii aysan jirin unug hoobiye.
Waa in maskaxda lagu hayaa in Soylent si adag loogu xakameynayo sunta loo yaqaan 'Idol' kiimikada loo yaqaan 'sulfateic copper sulfate, 345 g / l). Bayaankaani wuxuu run u yahay badiyaa qaboojiyeyaasha marka loo eego walxaha kiimikaad ee cusbada.
Xusuusnow ka sokow cusbada adkaha ee kala diri, xaddi badan oo cusbo cusbo laga yaabo inay biyo ku jiri karaan. Dhaqan ahaan, biyaha artesian oo ay ku jiraan maadada sodium chloride, sulfate iyo bicarbonate ayaa la ogaaday inay sahlan tahay in loo kala saaro macdanta. In kasta oo ay ka kooban tahay kaalshiyamka iyo magnesium-ka ku dhex yaal aysan ahayn wax aad u muhiim ah, biyaha cusbada leh waxay lahaan karaan dhaqdhaqaaq koronto oo dhowr kun oo microsiemens / cm ah. Iyo iyada, sidoo kale, dhammaan dhibaatooyinka nooc kasta leh way la kici karaan. Maaddaama cusbada (iyo xitaa haba yaraato) biyaha badanaa waxaa loo kala qaataa qaab ay isugu jiraan emulsions iyo xanibaado. Xirmooyin biyo-la-karin (tiro dawooyin ah ayaa leh xirmo sidan oo kale ah) oo ah biyo noocan oo kale ah oo si aad ah loogu buuqsan karo. Sidaa darteed, way ka saxsan tahay biyaha cusbada, maadaama oo aan xitaa biyaha lagu xiriirin, waxay si xun u saameyn kartaa deganaanshaha iyo waxtarka emulsion iyo xannibaadaha.
Cufnaanta, ama pH, si dhakhso leh ayaa loo go'aamin karaa iyada oo la adeegsanayo warqad tilmaame (oo leh heer sare oo aad u hooseeya) ama adeegsan kara mitirka pH la qaadan karo, kaas oo, ka duwan mitirka dhaqdhaqaaqa la qaadan karo, ee u baahan daryeel aad u badan oo taxaddar leh. Ku isticmaalida aaladda deegaan deegaan dejin gebi ahaanba kuma habboona.
Inta badan sunta cayayaanka, marka la eego xasiloonida xalka shaqada iyo waxtarkooda, waa fikrad fiican in la helo xalka shaqada aashitada yar Tani waxay sabab u tahay, hal dhinac, xasillooni darrada inta badan d.v. loo yaqaan 'hydrolysis alkaline', iyo tan kale - iyada oo xaqiiqda ah in aaladda aashitada ay dhiirrigelin karto wax ka qabashada D. iyada oo loo marayo cuticle of dhirta. Qalabka aaminaadda iyo kuwa la midka ah ayaa isku mar isku wada xira cusbada adkeynta iyo acidite xalka shaqada, sidaas darteed waxaa loo isticmaali karaa isku mar si loo jilciyo biyaha oo loo asiidheeyo. Intaa waxaa sii dheer, marka laga reebo dhif iyo naadir (biyaha biya, tusaale ahaan) biyaha dabiiciga ah waxay leeyihiin falcelin alkaline ah (ugu horreyn sodium, kalsiyum iyo magnesium bicarbonates ayaa ku dhex milmay). Idinkana uma baahnid mitirka pH-ka oo u baahan dayactir xasaasi ah.
Mabda 'ahaan, haddii dhaqdhaqaaqa biyuhu ay hooseeyaan (dhammaantood 500 μS / cm), oo pH-du aad ugama yarayn qiime dhexdhexaad ah (oo aan aad uga sarreeyn 7), markaa daawooyinka badankood, aashitada biyaha ma aha baahi degdeg ah, in kasta oo, dabcan, aan ahayn way dhaawaceysaa. Waxa ka reeban halkan waa fungicides ku saleysan cusbada naxaasta ah iyo, ilaa xad, diyaarinta ku saleysan sulfonylureas, kuwaas oo u nugul aashitada halkii ay ka isticmaali lahaayeen alkaline hydrolysis, oo sidaas darteed xasiloonida xallinta xajiinta aashitada ka badan tan alkaline.
Laakiin, si kastaba ha noqotee, waxaa jira tiro d Qarniga ah, kaas oo aashito ee xalka shaqada ee pH 5 - 6 aad loo jecel yahay. Mararka qaarkood, xaaladaha cimilada awgood, waxaa lagama maarmaan ah in looga tago xalka shaqada ee buufiyaha ama qeybta xalka. Soosaarayaasha qaarkood (caymis ka dhan ah sheegashooyinka suurtagalka ah) waxay ku qoraan talooyinka in isticmaalka xalka shaqeynaya ay dhacdo isla markaaba diyaarinta ka dib. Laakiin, sida Goethe uu dhihi jiray: "aragtidu waa qalalan tahay, saaxiibkay, oo geedka noloshu aad ayuu u cagaaran yahay»... Sidaa darteed, maahan fikradaha, laakiin kuwa ku takhasusay, iyada oo la tixgelinayo faanka nolosha dhabta ah, waxaan ku siineynaa liiska 'DV' kaas oo biyo leh falcelin alkaline ah (pH> 7) ay tahay mid aan loo baahnayn. Gaar ahaan xaalada kor lagu sharaxay, markay dhibaatooyin ka dhashaan isticmaalka degdega ah ee xalka shaqada ka dib diyaarinta. Iyo isku darka taangiyada ee wakiilada alkaline (tusaale ahaan, sida sodium ama potassium humates, pH oo ay gaari karto 9-10) walxahan. sidoo kale waa la diiday.
Waa tan liiska dv ee loo adeegsaday diyaarinta Agustausta»u nugul biyuha alkaline hydrolysis, kaas oo xalka ku saleysan biyaha ee pH alkaline-ka uu u baahan yahay aashitada (isticmaal isla Soylent):
acidation loo baahan yahay: Desmedifam (Biceps 22, Biceps Garant), fenmedifam (Biceps 22, Biceps Garant), iyo sidoo kale FOPs - fenoxaprop-P-ethyl (Eraser 100, Eraser Top, Eraser-extra), Clodinafop-propargil (Eraser Top), Halox R-methyl (Degdeg ah), chizalofop-P-ethyl (Miura) iyo malathion (Aliot);
aciditis waa suurad wacan: dimethoate (Cirocco); pyrethroids - alpha-cypermethrin (Borey Neo), lambda-cygalothrin (Break, Borey), cypermethrin (Shar Pei), esfenvalerate (Senpai), iyo sidoo kale chlorpyrifos (Tyra) iyo cymoxanil (Ordan).
Waa in maskaxda lagu hayaa in foomka diyaarinta ahi uu xoogaa ka ballaadhan yahay D.V., sidaa darteedna dawooyinka qaaska ah waxaa jiri kara talooyin gaar ah.
Su’aasha inta badan soo ifbaxaya ayaa ah: maxaa laga yeelayaa iskudhafka taangiyada ee daroogada kooxda betanal iyo triflusulfuron methyl? Xaaladda jirta, waxaan doorannaa dhinaca jasiiradda ugu nugul burburka. Sulfonylureas waxay u dulqaadan doontaa ficilcelinta aashitada si aad uga fudud sida loo yaqaan desmedifam iyo phenmedifam - alkaline hydrolysis. Acid-oo aan la silcin shaki.
Daawada waa mid tayo sare leh. Ka waran biyaha?
Biyaha waa la wasakhayn karaa iyada oo ay ugu wacan tahay xannibaado kaladuwan oo kala-qaybsan awgood, dabiici ahaan iyo beero-mareenka. Waxyeellada bey'adda iyo dhoobada ayaa saameyn aad u xun ku leh arrinta dabiiciga iyagoo leh isku-darka kaarboon / biyo-ballaadhan oromoga (Ingiriisiga loo soo gaabiyo KOC). Markii ay sii weynaato tiradaas, ayaa inta badan maaddadu u nugul tahay u nuugista. Biyo dhoobo ah, kani waa d. firfircoonaanta ayaa noqota mid aan caadi ahayn.
Marka qiimaha CBS lagu cabiro tobanaan kun (glyphosate) ama unugyo malaayiin ah (diquat), tani waa calaamad muujineysa inaad aad uga fikirto jahwareerka biyahaaga. Run, in lagu cabbiro aaladaha iyo go'aaminta dabeecaddeeda waa hawl u taal maskaxda aad wax u baarta, oo u baahan qalab qalafsan. Sidaa darteed, Mareykanku waqtigoodii wuxuu ikhtiraacay farsamo iyaga uga baxday kaliya 25 sent, taas oo sicirka maanta lagu sarifo uu yahay oo keliya 20 rub. Waxaan hagaajiyay farsamadan, iyo meelaha furan ee Ruushka waxay kugu kici doontaa adiga si sax ah 10 jeer ka jaban - kaliya 2 rub. Qaado qadaadiic laba-ruble ah, ku tuur baaldi biyo ah oo buuxa (10-12 litir), oo haddii aad ku aragto xagga hoose, markaa biyaha noocan ah waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin kuwo ku habboon xaalad ahaan marka loo eego jahwareerka. Iyo haddii aadan xitaa arkin lacag shan ruble ah (in kastoo ay taasi dhacdo marar dhif ah), lacagtaadu way ooysay. Raadi ilo kale oo biyo ah si aad u diyaariso xalka shaqada.
Diquat iyo glyphosate ayaa si aad ah ugu nugul biyaha dhoobo leh, sidoo kale ma jecla oxyfluorfen iyo pendimethalin. Hagaag, sida dv kale, waxaan kugula talinayaa inaad fiiriso barta qallafsan.ru oo fiiri miiska “Dabeecadda Deegaanka» Qiimaha gaarka ah ee CBS ee maadada aad xiiseyneyso. Hadday ka soo horjeeddo qiimaha waxay leedahay "ma dhaqaaqdo», tani macnaheedu waa - biyo daruuro leh ayaa loo adkeeyay diyaarintaaga.
Dhibaatooyinka badanaa badanaa waxay ku dhacaan biyo aad u qabow - dhammaan qaababka looma dulqaato. Tani waxay keenaysaa dhibaatooyin xagga diyaarinta xalalka shaqada ee unugyada hoosaadka (gaar ahaan meesha urea ama saltpeter lagu daro biyahan, ka dib heerkulka ayaa ka hooseeya eber), kuwa wax buufiya ama makiinadaha wax lagu gurto. Tani ma qusayso qarnigii D. kaliya, laakiin sidoo kale waxay u adeegsanaysaa qaybaha kale ee sameynta. U fiirso! Qaado diyaarin gaar ah oo ku samee xalka tijaabada biyo qaboojiyaha.
In la sii wado
Waxaa sawiro ka qaaday O. Seifutdinova, Shutterstock, oo ka socda Amazon
Qalabka Wargeyska Polle Augusta No. 5, 2020
Tags: "Agoosto"tayada biyahaWaxtarka sunta cayayaanka
Horumarka shaqada gu'ga gu'ga 13ka Maajo
Waajibaadka ka hortagga daadinta ee sunta dhirta Yurub ayaa kicisay wareejinta waxsoosaarkooda Ruushka
Shirkadda "Agoosto" waxay ku maalgelinaysaa nus bilyan rubir dhismaha xarunta saadka ee gobolka Lipetsk
Cudurada ugu waaweyn ee dhirta ee waxyeeleeyay beeraha sanadka 2020
Cabbirka wax soo saarka baradho ee gobolka Arkhangelsk muddo shan sano ah wuxuu kori doonaa ugu dhawaan 20%
Mulkiileyaashii dhulkii Mari El Republic waxay bilaabeen inay beertaan "rooti labaad."
Beeraleyda degmada Volga ee degmada waxay heleen qalabkii ugu kireynta badnaa ee loogu talagalay shaqada garoonka
Dhismaha xarun lagu keydiyo 11 kun oo tan oo baradho abuur ah ayaa lagu dhammeystirey degmada Taldom ee gobolka Moscow